Ahoana no Hanazavako hoe Misy ny Mpamorona? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY
Kreôla any Haïti
Serba (Soratra Romanina)
MANONTANY NY TANORA
Nisy ho Azy ve ny Fiainana sa Noforonina? Fizarana 4: Ahoana no Hanazavako hoe Nisy Namorona Izao Rehetra Izao?
Mino ianao fa nisy namorona izao rehetra izao, saingy tsy te hiresaka an’izany any am-pianarana ianao. Manohana ny evolisiona angamba ny boky ianaranareo, ka matahotra ianao sao dia hihomehezan’ny mpampianatra sy ny mpiara-mianatra aminao. Inona àry no hanampy anao hatoky tena ka ho sahy hanazava hoe nisy namorona izao rehetra izao?
Tokony ho vonona tsara ianao
Inona ny fitaovana hanampy anao hanazava ny zavatra inoanao?
Ny hevitry ny tanora toa anao
Mety hieritreritra ianao hoe: ‘Tsy dia mahay manazava momba ny siansa sy miady hevitra momba ny evolisiona ange ’zaho e!’ Efa nahatsapa toy izany koa i Danielle. Hoy izy: “Tsy tiako mihitsy ny nanohitra ny hevitry ny mpampianatra sy ny mpiara-mianatra tamiko.” Hoy koa i Diana: “Rehefa niady hevitra tamiko izy ireo ka nampiasa voambolana ara-tsiansa, dia tsy hitako izay nolazaina.”
Tadidio anefa fa tsy hoe ny handresy amin’ilay adihevitra no tanjonao. Tsy voatery ho manam-pahaizana be momba ny siansa ianao vao ho afaka hanazava ny antony mahatonga anao hino hoe nisy namorona izao rehetra izao.
Soso-kevitra: Resaho ilay hevitra tsotra nefa mitombina tsara ao amin’ny Hebreo 3:4 hoe: “Mazava ho azy fa nisy nanao ny trano rehetra, fa ilay nanao ny zava-drehetra kosa dia Andriamanitra.”
Izao no lazain’i Carol rehefa manazava an’ilay Hebreo 3:4: “Eritrereto hoe mamakivaky ala mikitroka ianao. Kilaometatra maromaro miala eo vao misy olona mipetraka. Nahita hazo kely fisokirana nify teo amin’ny tany anefa ianao. Dia inona no fanatsoahan-kevitrao? Tsy maintsy hilaza ny ankamaroantsika hoe: ‘Nisy olona nandalo teto.’ Koa raha zavatra tsy misy dikany hoatran’ny hazo kely fisokirana nify aza inoanao hoe nisy nitondra matoa tonga teo, mainka fa izao rehetra izao sy ny zavatra rehetra eo aminy!”
Raha misy miteny hoe: “Raha nisy namorona izao rehetra izao, dia iza àry no nanao ny Mpamorona?”
Dia azonao valiana hoe: “Tsy tokony hieritreritra isika hoe tsy misy ny Mpamorona satria fotsiny hoe tsy fantatsika ny zava-drehetra momba azy. Mety tsy ho fantatrao, ohatra, ny tantaran’ny olona nanamboatra ny telefaoninao. Mbola mino ihany anefa ianao hoe nisy olona nanamboatra ilay izy. Sa tsy izany? [Avelao izy hamaly.] Be dia be ny zavatra azontsika ianarana momba ny Mpamorona. Raha tianao, dia azoko resahina aminao ny zavatra nianarako momba azy.”
Milaza ny Baiboly hoe: “Aoka ho vonona foana ianareo hilaza ny fiarovan-tenanareo eo anatrehan’izay manontany ny anton’ny fanantenana ao anatinareo. Ataovy amim-pahalemem-panahy sy amim-panajana lalina anefa izany.” (1 Petera 3:15) Mila eritreretina àry hoe inona no horesahinao ary ahoana no fomba hiresahanao azy.
Inona no horesahinao? Mila tia an’Andriamanitra aloha ianao, satria izany no hanosika anao hiresaka momba azy amin’ny hafa. Tsy ampy anefa ny miteny amin’ny olona hoe tia an’Andriamanitra ianao, raha tianao ho resy lahatra izy ireo fa Andriamanitra no namorona ny zava-drehetra. Mety ho tsara raha mampiasa ohatra momba ny zavaboary ianao mba hanaporofoana hoe ara-dalàna ny hinoantsika ny Mpamorona.
Ahoana no fomba hiresahanao azy? Miezaha hatoky tena rehefa miteny, nefa aza masiaka na manambanimbany ny zavatra inoan’ilay olona. Azo antoka fa hisaintsaina ny zavatra nolazainao izy raha hita amin’ny teninao fa manaja azy ianao. Ekeo koa fa afaka misafidy izy hoe hino na tsy hino ny zavatra lazainao.
“Hitako hoe tena tsy mety ny manivaiva olona na miseho ho mahay be. Tsy hahomby mihitsy ianao raha manambanimbany olona rehefa miteny.”—Elaine.
Raha vonona hanazava ny zavatra inoanao ianao, dia mitovy amin’ny olona iray efa niomana sao ho ratsy ny andro
Hoy i Alicia: “Raha tsy miomana tsara ianao, dia tsy ho sahy hiteny satria matahotra sao ho afa-baraka.” Tena ilaina àry ny manomana tsara raha te hahomby. Hoy koa i Jenna: “Tsy dia matahotra loatra miresaka momba ny famoronana aho, rehefa manana ohatra tsotra nefa mety tsara mba hanaporofoako ny zavatra inoako.”
Aiza no mety hahitanao ohatra toy izany? Nahomby ny tanora maro rehefa nampiasa an’ireto fitaovana ireto:
Nisy Namorona ve Izao Rehetra Izao?
Ahoana no Nampisy Antsika? Fanontaniana Dimy Mila Dinihina
Manambara ny Voninahitr’Andriamanitra ny Hakanton’ny Zavaboary (video)
Ireo lahatsoratra hoe “Nisy Namorona Ve?”ao amin’ny Mifohaza! (Midira ao amin’ny FITEHIRIZAM-BOKIN’NY Vavolombelon’i Jehovah ato amin’ny Internet, ary soraty eo amin’ilay faritra fanaovana fikarohana ny teny hoe “nisy namorona ve” [asio farango sosona].)
Ampiasao ny FITEHIRIZAM-BOKIN’NY Vavolombelon’i Jehovah raha te hanao fikarohana fanampiny.
Mety hanampy anao koa ireo andian-dahatsoratra hoe “Nisy ho Azy ve ny Fiainana sa Noforonina?”
Fizarana 1: Haiko ve ny Manaporofo fa Misy Andriamanitra?
Fizarana 2: Tena Mitombina ve ny Fampianarana Momba ny Evolisiona?
Fizarana 3: Tena Nisy Namorona Tokoa ve Izao Rehetra Izao?
Soso-kevitra: Fidio izay ohatra nandresy lahatra anao. Ho mora kokoa aminao ny hitadidy azy ireny, ary hatoky tena tsara ianao rehefa manazava azy. Averimbereno ny fomba hanazavanao ny zavatra inoanao.
“Raha nivoatra miandalana isika, nahoana àry isika no manana toetra tsara toy ny fangorahana sy fitiavana? Mahatonga antsika hihevitra ny hafa ireo toetra ireo fa tsy ho tia tena. Tsy mitombina amiko ny hoe vokatry ny evolisiona ireo toetra ireo.”—Brittany.
“Rehefa nianatra siansa aho, dia nahafantatra ny firafitry ny sela sy ny asany. Marina fa nanohana ny evolisiona ilay fianarana. Lasa nazava tamiko anefa hoe nisy namorona isika, ary tena mahay izy.”—Breanna.
“Miaiky Aho fa Noforonin’Andriamanitra ny Zava-drehetra”
Fantaro hoe nahoana no niova ny fiheveran’ny mpahay siansa iray ny evolisiona, Baiboly, ny niavian’ny zava-drehetra.
Nisy ho Azy ve ny Fiainana sa Noforonina? Fizarana 1: Haiko ve ny Manaporofo fa Misy Andriamanitra?
Nisy ho Azy ve ny Fiainana sa Noforonina? Fizarana 2: Tena Mitombina ve ny Fampianarana Momba ny Evolisiona?
Nisy ho Azy ve ny Fiainana sa Noforonina? Fizarana 3: Nisy Namorona Tokoa ve Izao Rehetra Izao?
FANONTANIANA HAFA APETRAKY NY TANORA...
Firaisana sy Fitiavana
Ahoana Raha Taomin’ny Ankizy Hanao Firaisana Aho?
Manintona Ahy ny Ankizilahy toa Ahy. Lasa Lehilahy Tia Lehilahy ve Izany Aho?
Mila Fanampiana ve Ianao mba Tsy Hieritreretana Zavatra Vetaveta?
Ahoana Raha Zatra Mijery Sary Vetaveta Aho?
Inona no Azoko Atao Raha Misy Manadala Ahy?
Efa Mahazo Mampiaraka ve Aho?
Efa Vonona Hanambady ve Aho?
Mety Amiko ve Izy?
Tokony Hisaraka ve Izahay? (Fizarana 1)
Tokony Hisaraka ve Izahay? (Fizarana 2)
Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Hafatra Vetaveta?
Ahoana Raha Resaka Firaisana no Anontanian’ny Ankizy An’ahy?
Nahoana Aho no Tsy Tokony Hijery Sary Vetaveta?
Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Fametavetana? Fizarana 1: Inona ny Fitandremana Tokony Hatao?
Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Fametavetana? Fizarana 2: Ahoana Raha Efa Niharan’izany Aho?
Tena Firaisana ve ny Firaisana Amin’ny Vava?
Mety ve ny Mivoady hoe Hijanona ho Virjiny?
Mpinamana Fotsiny sa Mpifankatia? Fizarana 1: Tia Anao Tokoa ve Izy?
Mpinamana Fotsiny sa Mpifankatia? Fizarana 2: Tena Tia Azy Tokoa ve Aho?
Ratsy ve ny Firaisan’ny Samy Lehilahy na Samy Vehivavy?
Tsy Mampaninona ve ny Manadaladala Olona?
Inona no Hataoko fa Nisaraka Izahay?
Ahoana Raha Tsy Mana-namana Aho?
Ahoana no Hatao mba Tsy ho Resin’ny Fakam-panahy?
Iza re no ho Namako E?
Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny SMS?
Ahoana no Hataoko Raha Misy Mifosa Aho?
Fa Maninona Aho no Tsy mba Mana-namana?
Nahoana Aho no Tokony Hinamana Amin’ny Olona Isan-karazany?
Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Fandefasana Sary ao Amin’ny Internet?
Inona no Ataoko fa Nisaraka i Dada sy Neny?
Nahoana no Tsy Avelan’i Dada sy Neny Hifalifaly Aho?
Inona no Ataoko mba Hatokisan’i Dada sy Neny Ahy?
Inona no Hanampy Ahy Hanaiky ny Fitsipik’i Dada sy Neny?
Ahoana no Hiresahako Amin’i Dada sy Neny Momba ny Fitsipika Apetrany?
Ahoana Raha Nandika ny Fitsipik’i Dada sy Neny Aho?
Hiala ato An-trano Ihany ve Aho sa Tsia?
Inona no Hataoko mba Tsy Hifamaly Amin’ny Ray Aman-dreniko Aho?
Ahoana no Hiatrehako Olana Lehibe?
Izaho ve dia Hofehifehezin’i Dada sy Neny Foana?
Ahoana Raha Tsy Mifanaraka Izaho sy ny Iray Tam-po Amiko?
Marary ve ny Dadanao na ny Neninao?
Inona no Hataoko mba Tsy Hidikiditra Be Amin’ny Fiainako ry Zareo?
Ahoana Raha Mankaleo Ahy ny Mianatra?
Ahoana no Hahazoako Naoty Tsara Kokoa?
Ataoko Ahoana Daholo Ireto Devoara Ireto?
Tsy Tia Ahy ny Mpampianatra Anay
Tokony Tsy Hianatra Intsony ve Aho?
Inona no Ataoko fa Ampijalin’ny Ankizy Aho?
Inona no Hataoko mba Tsy Hatavy Loatra?
Inona no Handrisika Ahy Hanao Fanatanjahan-tena?
Inona no Hataoko mba ho Ampy Torimaso Aho?
Ahoana no Hiatrehako ny Aretiko? (Fizarana 1)
Ahoana no Hiatrehako ny Aretiko? (Fizarana 2)
Inona no Hataoko mba Tsy Halahelo Be Hoatr’izao Aho?
Inona no Hataoko mba Tsy Hanahy Be Loatra Aho?
Ahoana no Hiatrehako ny Aretiko? (Fizarana 3)
Ahoana no Hiatrehako ny Fiovana eo Amin’ny Vatako?
Inona no Hataoko Raha Kivy Be Aho?
Inona no Hanampy Ahy Tsy Hangataka Andro?
Mifantoka Be Loatra Amin’ny Bikako ve Aho?
Fa Maninona Aho no Lasa Mampijaly Tena?
Mba Matotra Ihany ve Izaho Ity?
Nahoana Aho no Tokony Hanampy Olona?
Ahoana no Hataoko Rehefa Izaho no Diso?
Tena Ilaina ve ny Mahalala Fomba?
Mety ve ny Maka Tahaka Olona Amin’ny Tele? Fizarana 1: Ho An’ny Ankizivavy
Mety ve ny Maka Tahaka Olona Amin’ny Tele? Fizarana 2: Ho An’ny Ankizilahy
Inona no Ataoko fa Tsy Voafehiko ny Hatezerako?
Tena Tsy Mety ve ny Miteny Ratsy?
Nahoana Aho no Mila Manao ny Marina?
Manao Ahoana ny Paoziko?
Tokony Hanao Tatoazy ve Aho?
Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Toaka?
Inona no Mahatsara ny Mianatra Fiteny Hafa?
Mitady ny Tonga Lafatra ve Aho?
Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Lalao Video?
Tsy Mampaninona ve Izay Mozika Henoiko?
Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Spaoro?
| FIFANEKENA MOMBA NY TSIAMBARATELO